Tor yabvisa mazana masere enzvimbo mazana matanhatu nemazana matanhatu yainayo, nekuti anga asisashandiswe | Linux Vakapindwa muropa
Tor yabvisa mazana masere enzvimbo dze800 dzainayo, nekuti dzaive dzisisashandiswe
Darkcrizt | | Updated on 13/10/2019 19:48 | Noticias
ari vagadziri ve iyo isingazivikanwe network Tor akayambira nezvekuchenesa saiti kukuru uchishandisa yechinyakare software, iyo isingachatsigirwi. Musi waOctober 8, dzakakomberedza mazana masere epera node dzakapunzika inoshanda mu relay mode (yakazara, iyo network Tor ine anopfuura mazana matanhatu ematanhatu emhando dzerudzi urwu).
Kuvharira Izvi zvakaitwa nekuisa madhairekitori edhairekitori pane runyorwa rwema node ane chinetso. Izvi zvinotarisirwa kusabatanidza netiweki yenzvimbo dzisina kuvandudzwa gare gare. Ipo yeiyo inotevera yakagadzika vhezheni yeTor, iyo yakarongerwa munaNovember, ichave nesarudzo yekuti nekumisikidza inoramba kubatana kune node dzinoshandisa vhezheni dzeTor iyo kugadziriswa kwapera.
Muchiziviso vanotaura kuti:
Idzi node dzinomhanya neshanduro dzeTor software dzinodzokera kumashure ku0.2.4.x dzakateedzana, dzakaburitswa muna Zvita 10, 2013. Dzimwe dzinotevera-gen dzinodzosera dziri kumhanyisa kodhi yedu yazvino mushanduro dzehusiku uye neshanduro dzeAlpha.
Idzi shanduro dzinodzosera dzinomiririra angangoita makore mashanu eTor kukura. Pane huwandu hwesere neshanu dzakasiyana shanduro dzeTor, kubva paAlpha kusvika pakugadzikana, mukushandisa neanodzosera nhasi.
Kuchengetedza idzi shanduro zvinoreva kuti iyo Network Team inotarisira kugadzirisa yakakosha nyaya dzekugadzikana, kuchengetedzeka kusagadzikana, uye kutapurika kudzoka. Isu tinogona zvakare kugadzirisa madiki madhigi ayo anokanganisa zvakanyanya ruzivo rwevashandisi.
Nezvo vanotizivisa izvo shanduko yakadaro inobvumidza iyo network kuvandudzwa mune ramangwana, sezvo rutsigiro rweanotevera mavhezheni harusisiri rwoga kusarudzika kubva kunetiweki node dzisina kuchinjira kune yazvino software munguva.
Somuenzaniso, parizvino, kunyangwe node dzine Tor 0.2.4.x, iyo yakatangwa muna 2013, vachiri paTor network, kunyangwe kutsigirwa kwebazi 0.2.9 LTS kuchiri kuenderera.
Vashandi vechinyakare vashandisi vakaziviswa yeiyo yakarongedzwa blockade munaGunyana kuburikidza neyekutumira zvinyorwa uye nekutumira yega yambiro kune ekutaurirana kero dzakatsanangurwa muKutauriranaInfo munda.
Mushure mekunyeverwa, huwandu hwenzvimbo dzechinyakare hwakaderera kubva pa1276 kusvika panenge mazana masere.
Zvinoenderana nekufungidzira kwekutanga, parizvino ingangoita 12% yetraffic inodarika node dzisisina basa, mazhinji acho akabatana nekutapurirana kwekufambisa; mugove wekunze-kwe-zuva kubuda node traffic ingori 1,68% (62 node).
Kubviswa kwenzvimbo dzechinyakare kubva kunetiweki inofungidzirwa kuti ingakanganisa zvishoma saizi yenetiweki uye inotungamira kune sag shoma mumataiti anoratidza mamiriro enetiweki isingazivikanwe.
Iko kuvapo mu network yemakomputa ane echinyakare software zvinokanganisa kugadzikana uye zvinounza dzimwe njodzi dzekutyora kwekuchengetedza.
Kana manejimendi akasatarisa Tor kugadzirisa, ipapo vangangoregeredza kugadzirisa iyo system uye mamwe maseva mashandisirwo, ichiwedzera njodzi yekutora node nekuda kwekurwiswa kwakanangwa.
Isu tinovimba kuti yedu inotevera yakagadzika vhezheni yeTor (kutenderedza Mbudzi 2019) ichave iine shanduko yesoftware iyo inoramba kupera-kwe-kwehupenyu kudzoreredza nekutadza. Kusvikira panguva iyoyo, isu tinoramba takatenderedza mazana masere ekare anodzokororwa uchishandisa zvigunwe zvako.
Mabhiriji asisina basa haasati achizorambwa; ivo vacharambwa gare gare mu2019, patinoisa iyo Tor software shanduko.
Uyewo, kuvapo kwenzvimbo dzakamiswa vhezheni kunokanganisa kururamisa kwakakosha zvikanganiso, Inodzivirira kupararira kwezvinhu zvitsva zveprotocol uye inoderedza kugona kwewebhu.
Semuenzaniso, node dzisina kuvandudzwa dzinoratidza HSv3 processor chikanganiso chinokonzera kuwedzera kunonoka panguva yekufamba kwevashandisi traffic kuburikidza navo uye kuwedzera huwandu hwakazara pamambure nekuda kwevatengi vanotumira zvakadzokororwa zvikumbiro mushure meHSv3 yekubatanidza kugadzirisa kukundikana.
Chekupedzisira kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve chirevo nevanhu veTor, unogona kuzviita pa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Tor yabvisa mazana masere enzvimbo dze800 dzainayo, nekuti dzaive dzisisashandiswe
Kuverenga musoro, pane kuverenga kusingandivhare ……
Musoro wenyaya une typo. Sezvo munhau iwe unoratidza kuti pane mazana matanhatu, uye mumusoro wenyaya munowanikwa mazana matanhatu, izvo zvinoita kuti uve musoro usina musoro
"Yakabvisa mazana masere emazana matanhatu ayo"
Ini ndinofunga hazvina basa kuvaudza izvi, asi ivo vanofanirwa kutora hanya nekunyora kwavo: chiperengo, gender uye nhamba conconance uye kuti vanyore mazwi ese.
Icho chinhu chakakosha icho hapana munhu anofanirwa kukuyeuchidza nezvacho.
Asi pamwe ini ndiri iye ari kukanganisa uye yake haisi yekutarisa kana chikanganiso chemunwe asi chimwe chinhu nemaune kuve sensationalist uye kunyorera iyi yekupinda sezvo iyo Tor inobvisa 800 yemazana matanhatu mazana mairi ainayo pachinzvimbo che600, inoita kunge chimwe chinhu kuzviuraya. kukanda zvisingaite, nekuti haugone kubvisa mamwe maodhi kupfuura iwe.
Chaitove chikanganiso chemunwe, ndinokumbira ruregerero:
Iyo itsva vhezheni yeOpenSSH 8.1 inosvika ichigadzirisa kusagadzikana
Iyo nyowani vhezheni yeArc Menyu 33 inosvika, iine icon nyowani, rutsigiro rweGnome 3.34 uye nezvimwe